Muuri News Network » Warbixin ay ku farxeen Reer Sweden oo la soo saaray (Maxaa Cusub?)
Warbixin ay ku farxeen Reer Sweden oo la soo saaray (Maxaa Cusub?)
Inkasta oo ay dhismaha guryaha kor u kaceen labadii sanno ee ugu dambeeyay, ayaa sannadka dambe 2016 la filaya in ay tani hadana hoos u degto, sidaas waxa saadaalinaya shirkada Sveriges Byggindustrier.
Sannadka aan ku jirno ayaa la filaya in la bilaabo dhisitaanka 44 500 oo guri. Tiradan ayaa sannadka dambe noqon doonta 42 500. Johan Daremar oo ka hawlgala Sveriges Byggindustrier ayaa ka mid ah dadkii tirokoobkan soo saaray.
-Dhismaha guryaha Iswiidhan ayaa sannadka dambe hoos u dhacaysa, in kasta oo dhismahu yahay mid sareeya, marka aanu eegno qorshaha sannadka dambe waxaanu aragna in baahida dadka gurya l´aantu hayso iyo heerka dhismaha guryaha is leekin. Waa sida u hadalka u soo dhigay Johan Daremar.
In kasta oo labadii sanno ugu dambeeyay guryo faro badan la dhisay, weli waxaa badan dadkii gurya la’aantu haysay. Sveriges Byggindustrier ayaa filaya in baahiida guryaha loo qabo mustaqbalka hoos u degi doonto madama canshuurtii la kordhiyay , tan ayaa keentay in ay dadka ku sii atkaanayso in ay qaatan lacagta amaahda guryaha, islamarkaas na ay dawladdu ku talo jirto in ay dadka lacagtan amaahda deg deg iskaga bixiyaan.